Mutungamiri webato reCitizens’ Coalition for Change, VaChamisa, Vokurudzira Kuti Nyaya yeGukurahundi Ikasike Kugadziriswa
Vatsigiri vebato reCitizen's Coalition for Change.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens’ Coalition for Change VaNelson Chamisa vati zvakakosha kuti nyika igadzirise nyaya yeGukurahundi kuti munyika muve nekuregererana nerunyararo rwechokwadi.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevatsigiri vavo pamusangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzema by-election dziri kuitwa mwedzi uno vari muguta reBulawayo, VaChamisa vati panofanirwa kutaurwa chokwadi chezvakaitika panguva yeGukurahundi kuti munyika mugove nekuregererana nerunyararo rwechokwadi.
Vati vanovimba kuti bato ravo richave iro rinotungamira hurumende mushure mesarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika mugore ra2023, vakati vachaona kuti paumbwa komisheni inotsvaga chokwadi chezvakaitika kana kuti “Truth and Reconciliation Commission”.
Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri, vakawanda vavo vaive vatsigiri veZAPU, vanonzi vakaurayiwa mumatunhu eMatabeleland neMidlands nechikwata chemasoja ehurumende nyika ichangobva kuwana kuzvitonga.
VaChamisa vashorawo nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo vati inoitwa nevatsigiri vebato reZanu PF. Vati vaive pakuvigwa kwamushakabvu Mboneni Ncube kuVungu nezuro vakati vanhu vanofanirwa kutsigira mapato avanoda pasina kutya. Varumbidza mashoko ekushora mhirizhonga akataurwa nezuro nemutevedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga ekukurudzira kuti munyika muve nerunyararo.
VaChamisa vatora kanguva vachiedza kutaura nerurimi rweNdebele izvo zvafadza veruzhinji. Vashorawo bato reZanu PF nekwavati kutadza kutungamira nyika uko vati kwakakonzera kuparara kwemaindasitiri, vakati kana bato ravo rikapinda muhurumende richakoshesa kuti guta reBulawayo ridzokere pachinzvimbo charo chekuve muzinda wemaindaistiri emunyika.
Asi vachitaura nezuro pamusangano wavakaitawo muBulawayo wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo reZanu PF VaChiwenga vakashorawo mapato anopikisa vachiti kutadza kutungamira kwawo mumakanzuru aari kutungamira mumaguta nemumadhorobha emunyika ndiko kwakonzera kuwondomoka kwezvinhu munyika.
Mumwe mutsigiri webato reCCC VaAndrew Mashini avo vanogara kuChitungwiza vange vari pamusangano wemuBulawayo nhasi, vari mumwe wevanhu vange vachitengesa chikafu vati vanotora mukana wekuuya kunoita vanhu vakawanda kumisangano yebato iri kuti vaite zvebhizimisi.
Mudunhu reBulawayo mune zvigaro zviviri zvedare reparamende nezvinomwe zvekanzuru zvichaitirwa sarudzo dzema by election musi wa26 Kurume.